Bankiga Dhexe ee Soomaaliya - Gpedia, Your Encyclopedia
Isuduwe: 2°02′50″N 45°21′20″E﻿ / ﻿2.04722°N 45.35556°E﻿ / 2.04722; 45.35556
Agoosto 23, 1960 (1960-08-23)
Prof Cabdisalaan Haji Hadiye
Bankiga Dhexe ee
ISO 4217 Astaan SOS
Bankiga Dhexe ee Soomaaliya (Af-Ingiriis: Central Bank of Somalia; Af-Carabi: البنك المركزي في الصومال) waa bankiga dhexe ee dowlada wadanka Soomaaliya. Shaqooyinka bankiga waxaa ugu horeeysa maamulka iyo iskudheelitirka dhaqaallaha wadanka, xisaabinta miisaaniyada dowlada, ilaalinta qiimaha lacagta wadanka iyo nidaaminta koboca dhaqaalaha wadanka. Intaas waxaa u dheer, maamulka iyo dejinta siyaasada dhaqaalaha iyo maalgeshiga dowlada.
1 Wasaaradda Maaliyada
2 Qaabdhismeeka Wasaarada
31 Agoosto 1960; 59 sanadood ka hor (1960-08-31)
Maxamuud Ibraahim Aadan, Wasiirka Maaliyada
Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya waa wasaarada gacanta ku haysa isla markaana maamusha dhaqaalaha dowlada, canshuuraha, iyo kharashka wadanka Soomaaliya. Intaas waxaa dheer, wasaaradani waxay masuul ka tahay habaynta, dejinta iyo diyaarinta siyaasada dhaqaalaha iyo maamulka miisaaniyada dowlada fedraalka ah. Sanad kasta bisha Oktoober, Wasaarada Dhaqaalahu waxay hortimaadaa Gollaha Baarlamaanka si ay u sharaxdo miisaaniyada sanadle ee dowlada federaalka. Guud ahaan, Wasaaradda Maaliyada Soomaaliya waxay hoostegtaa Wasiirka Maaliyada; wakhti xaadirkan waxaa wasiir ah Maxamuud Aadan Ibraahim. Bankiga Dhexe ee Soomaaliya waa bankiga dhexe ee dowlada wadanka Soomaaliya. Shaqooyinka bankiga waxaa ugu horeeysa maamulka iyo iskudheelitirka dhaqaallaha wadanka, xisaabinta miisaaniyada dowlada, ilaalinta qiimaha lacagta wadanka iyo nidaaminta koboca dhaqaalaha wadanka. Intaas waxaa u dheer, maamulka iyo dejinta siyaasada dhaqaalaha iyo maalgeshiga dowlada.
↑ Central Bank of Somalia - About the Bank
↑ "PM Sharmarke sacks two prominent female ministers". horseedmedia. June 25, 2016.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bankiga_Dhexe_ee_Soomaaliya&oldid=162521"